पत्रकार सम्मेलनमा मेस्सीले रुँदै भने -‘गुडबाइ’ !
बार्सिलोनाबाट बिदाइको मन्तव्य दिँदै गर्दा लियोनल मेस्सीले आफूलाई थाम्न सकेनन्। उनले स्थनीय समयअनुसार आइतबार मध्यान्नमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो बिदाइबारे जानकारी दिएका थिए।
अर्जेन्टिनी स्टार मेस्सीले रुँदै मन्तव्य सुरु गरे। करिब सात मिनेट आफ्ना कुरा राखेका उनले सबै समय रोएरै बिताए। जब उनले आफ्नो मन्तव्य सके त्यसपछि झन् थामिएनन्।
पत्रकार र क्यामेरासामु उनले आँसु खस्न दिइरहे। उनले बार्सिलानामा बिताएका दुई दशक र क्याटलान क्लबप्रतिको माया पनि मन्तव्यका क्रममा व्यक्त गरे।
त्यहाँ उपस्थित सबैले उठेर, ताली बजाएर उनलाई शान्त्वना दिएका थिए। कार्यक्रममा मेस्सीकी श्रीमति एन्टोनिला रोकुजो र उनका तीन सन्तान पनि उपस्थित थिए।
मेस्सीले के भने ?
यति धेरै वर्षपछि यो मेरो लागि धेरै अप्ठ्यारो अवस्था आइपरेको छ। मैले मेरो पूरा जीवन यहीँ नै बिताए।
उनले यसो भनिरहँदा धेरै पटक आँसु पुछिसकेका थिए। ‘मैले यो सहरमा बसिरहने छु भन्ने सोचेको थिएँ, त्यसले मलाई खुसी बनाएको थियो। म १३ वर्षको हुँदादेखि नै बार्सिलोनामा छु। तर २१ वर्षपछि म मेरो परिवारका साथ क्याटलोनिया छोड्न गइरहेको छु।’
उनले अगाडि भने, ‘तर म सबैसँग बाचा गर्छु, बार्सिलोना मेरो घर हो। म यहाँ समय मिलाएर आउनेछु। यहाँका धेरै मानिससँग मेरो नजिकको साइनो छ। म यो क्लबका सबैलाई मनभरि सम्झिने छु। मैले यहाँबाट धेरै अनुभव बटुलेको छु। यहाँका हरेका कुराले मलाई अघि बढ्न सहयोग गरेका छन्।’
मेस्सीले थपे, ‘त्यही विविध कारण म अहिले यहाँ छु। म जीवनभरि त्यो कुुरा सम्झनेछु। तर जे भयो मैले त्यो साँच्चै नै सोचेको थिइनँ। महामारीका कारण मैले यो कुरा धेरै जनासँग भन्न सकिनँ। तर म अब क्लब छोड्न गइरहेको छ। म यो कल्पनाको रंगशाला क्याम्प नोउ छोड्न गइरहेको छु। म फरक भूमिकामा यो क्लबमा फर्किने छु। त्यतिबेला पनि म मेरो बेस्ट दिनेछु। अहिले भन्न त्योबाहेक केही पनि छैन।’
उनले थप भावुक हुँदै भने, ‘मलाई लाग्छ सबै कुरा समाधान भइसकेका थियो, म सबै कुरामा सहमत थिएँ। तर अन्तिम घडीमा ला लिगाको कारण यो सबै भयो। त्यसपछि के भयो सबैलाई थाहा नै छ।’
म क्लबबारे केही पनि बताउन सक्दिनँ। जुआन लापोर्टाले उनीहरुले ला लिगाका कारण केही पनि गर्न नसक्ने बताए। म यति भन्न सक्छु, यहाँ बस्नका लागि मैले सक्नेजति गरेको थिएँ।’